Xasan Sheekh ma Somaliya ayuu u hadlaayay mise Kiiniya ayuu afhayeen u ahaa - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Xasan Sheekh ma Somaliya ayuu u hadlaayay mise Kiiniya ayuu afhayeen u ahaa
Waxaan wada ognahay in kiiska badda Somaliya iyo Kiiniya uu maxkamad horyaalo ayna u taala maxkamada inay go’aan ka gaarto xilliga ay qabanayso dhegeysiga u dambeeya. Waxaan shalay dhegeystay fadhiid Xasan sheekh Maxamuud oo la ogaa halka uu Somaliya kaga soo haray.
Waxaan is lahaa marnaba ka hadli maayo dacwada badda waayo waa kii lagu qasbey laguna waaniyay inuu geeyo maxkamada caalamiga ah mar hadday Kiiniya diidey inay miyirsato laakiin damacday inay laaluush ku qaadato baddeena.
”Ugu yaraan waxaan is lahaa wuxuu sheegan doonaa in dacwadii badda uu isagu geeyay haddana uu guul ka sugaayo maadaama intii ka hadhay ay dhamaystireen madaxdii ka dambeysay ayuu yiri Cali Calasow.
Fadhiid Xasan Sheekh oo dalka jufo jufo geliyay shalayna afka ku balaadhiyay inuu madaxda hadda jirta ay ka gaabiyeen in dalka la sii kala jarjaro ayaa cida keliya ee uu la hadlaayay ay ahayd Kiiniya. Maxkamad kiis yaala cidna hadal ugama furna laakiin waxa lagu yiri hadal ayuu yiri Cali Calasow.
Wuxuu ku bilaabay oo dad badana markiiba ay ogaadeen inuu afhayeen u yahay Kiiniya kulahaa weligay Kiiniya iskuma aanan dhicin intii aan joogey.
Lama yaabayo haddii afjayeen u noqonayo waayo hore ayuu ugu sujuudey meydkooda ayuu yiri Cali Calasow laakiin waxaan leehay meel wax kaaga banaan yihiin raadso sida Suma wala.